कसलाई पछ‍्याउँछन् सेलिब्रिटीहरू ?- जीवनशैली - कान्तिपुर समाचार
कसलाई पछ‍्याउँछन् सेलिब्रिटीहरू ?
फाल्गुन १५, २०७३ सजना बराल
प्रत्येक महिना ३१ करोड ३० लाख मानिसले ट्वीटरमार्फत् अनेक विचार व्यक्त गर्दै आएका छन् । हालै ह्वाइट– हाउस प्रवेश गरेका राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प ट्वीटरमा निकै एक्टिभ छन् । उनी कतिपय महत्त्वपूर्ण घोषणा ट्वीटरमार्फत नै गरिदिन्छन् । त्यसले संसारभर सनसनी मच्चाइदिने गरेको छ ।
ट्वीटरमा ट्रम्पका २ करोड ५४ लाख फलोअर्स छन् । उनको ट्वीटमा लाखौंले लाइक, रिप्लाई र रि–ट्वीट गर्छन् । ट्रम्प आफैंले भने ४३ जना मात्रै फलो गरेका छन् । खासमा कसलाई पछयाउँछन् उनी ? उनले रुचाएका मान्छे को हुन् ? ट्रम्प आफ्नै नामका कम्पनी, संघसंस्था एवं अमेरिकी राजनीतिज्ञ र सञ्चारकर्मीलाई फलो गर्दा रहेछन् । दक्षिण अफ्रिकी गल्फर गेरी प्लेयर र रेस्लिङ खेलका प्रवद्र्धक भिन्स म्याकमाहोन पनि ट्रम्पले फलो गरेका व्यक्ति हुन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्रम्पलाई पछयाएका छन् । उनले बेलायतको बेम्बली स्टेडियम, मेलिन्डा गेटस्, दलाई लामा, परेश रावल लगायतलाई पनि फलो गरेका छन् । १६ सय ४० जनामध्ये उनले एउटै नेपाली नेतालाई पनि फलो गरेका छैनन् । हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि ‘कमरेड प्रचण्ड’ नामक हयान्डलमा ५ जनालाई फलो गरेका छन् । त्यसमा ट्रम्प र उनकी छोरी इभान्का, गोविन्द खतिवडा, प्रकाश दाहाल र नेकपा माओवादी (केन्द्र) परेका छन् ।
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले १ हजार बढीलाई फलो गरेका छन् भने उनलाई फलो गर्नेको संख्या २ करोड ५२ लाख छ । बच्चनले थुप्रै खेलाडी, फनीट्वीटस, फस्ट लेडीहरूको अर्काइभ र प्रेरणादायी भनाइ उल्लेख गरिएका अकाउन्टहरू फलो गरेका छन् । उनले रेस्लर जोन सिनाको फयान क्लब, चेल्सी क्लब, बिल गेटस् आदिको ‘पिछा गर्न’ चाहेछन् । २ करोड फलोअर्स भएका आमिर खानले क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरबाहेक बाँकी ८ जना कलाकारलाई फलो गरेका छन् । कोलम्बियन गायिका साकिराले मलाला फन्ड, गेट्स फाउन्डेसन, पोप फ्रान्सिस गरी १ सय ९२ जनालाई फलो गरेकी छन् । ४ हजार ५ सय २ वटा टीट गरिसकेकी उनलाई ४ करोड ३० लाखले फलो गरेका छन् । सलमान खानले सुरज पन्चोली, शाहरूख र आमिर खान गरी २३ जनालाई फलो गरेका छन् ।
शाहरूखले पनि सलमानलाई पछयाएको पाइयो । शाहरूखले गायक जे सिन, साकिरा, अभिनेत्री इमा वाट्सन, लेखक पाउलो कोहेलो गरी ८१ जनालाई फलो गरेका छन् । अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले बिल गेटस्, रोजर फेडेरर, नोभाक जोकोभिक आदिलाई पछयाएकी छन् ।
आलिया भट्टले अमेरिकन ब्लगर पेरेज हिल्टन, नेपाली मूलका अमेरिकी फेसन डिजाइनर प्रबल गुरुङ, गायक जस्टिन बिबर, व्यवसायी बिल गेटस् लगायतलाई फलो गरेकी छन् । उनलाई चाहिँ १ करोड बढीले पछ्याएका छन् । फुटबल खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले हिपहप आर्टिस्ट लिल वाइने, गायिका जेनिफर लोपेज, बक्सर माइक टाइसन गरी ९५ जनालाई पछयाएका छन् । क्रिकेटर विराट कोलीले अनुष्का शर्मालाई त लिस्टमा पार्ने नै भए । साथमा, अमिताभ बच्चन, एआर रहमान र गायक जस्टिन टिम्बरलेक गरी ४४ जनालाई फलो गरेको भेटियो । उनलाई १ करोड ४० लाखले पछयाएका छन् । नेपाली उद्यमी विनोद चौधरी पनि टीटरमा सक्रिए देखिए । उनले रजनीकान्त, विनोद खन्ना, अरविन्द केजरीवाल गरी ४८ जनालाई फलो गरेका छन् ।
बाबा रामदेवले चाहिँ हलिउड अभिनेता ज्याकी च्यान, क्रिकेटर पल निक्सन, नेपाली पत्रकार सुवास घिमिरे, तिब्बती गुरु दलाई लामालगायत २ सय २६ जनलाई फलो गर्दा रहेछन् । प्रबल गुरुङले बैंकर अनिल केशरी शाह, गायिका माइली साइरस, अभिनेता टम हयांक्सलगायतलाई पछयाएका छन् । ‘गङनम स्टाइल...’ गायक साइले अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपती बाराक ओबामा, अभिनेता जिम क्यारेलगायतलाई नियालिरहेका हुन्छन् । धेरैद्वारा फलो गरिएका बिल गेट्स आफैंले चाहिँ अमिताभ बच्चन, लिओनार्दो डिक्याप्रियो, गायक जोन लिजेन्डलगायतलाई पछयाएका छन् ।
कसले कसलाई ?
डोनाल्ड ट्रम्प - ग्यारी प्लेयर
स्वामी रामदेव- च्याकी च्यान
मरेड प्रचण्ड - इभान्का ट्रम्प
अमिताभ बच्चन - जोन सिना (हयास सिना प्राउड)
शाहरुख खान - साकिरा
विनोद चौधरी - रजनीकान्त
नरेन्द्र मोदी - बेम्बली स्टेडियम
आलिया भट्ट - प्रबल गुरुङ
बिल गेटस् - अमिताभ बच्चन
विराट कोली - जस्टिन टिम्बरलेक
प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७३ ०९:०४
धादिङमा बढ्दै ‘होमस्टे’
फाल्गुन १५, २०७३ कान्तिपुर संवाददाता
आमकोट, धादिङ — भूकम्पपछि सुस्ताएको ग्रामीण पर्यटन फेरि जुर्मुराएको छ । बन्द भएका पुराना होमस्टे फेरि सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । यसबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको आकर्षण पनि थपिएको छ । वस्तीहरूमा सडक सञ्जाल फैलिएकाले पनि पर्यटकहरूको आगमन सहज भएको हो ।
‘बस्तीहरूमा होमस्टे सञ्चालनको माग आएपछि हामी हौसिएका छौं,’ ४० जनाको समूहमा नलाङको सिद्धबावा लेक आएका रामप्रसाद सापकोटाले भने । राजधानीबाट पूर्वपर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरसहित आन्तरिक पर्यटक आमकोट र कमलाबारी आएका छन् । उनीहरूलाई मगरबस्तीमा आरम्भ गरिएको होमस्टेमा मगर समुदायहरूले मौलिक सोरठी नाचले स्वागत गरेका थिए । पर्यटन व्यवसायी राकेश धमलाले कोरियन दातृ निकायको सहयोगमा नीलकण्ठको मधुवनलाई बीपी गाउँमा परिणत बस्तीलाई पर्यटकीय गाउँ बनाउन करिब १० करोडको लगानी भित्र्याएका छन् । पहिलो चरणमा सामुदायिक भवन, चक्रपथ निर्माण, होमस्टेहरू निर्माण भइरहेको धमलाले बताए । चालु आर्थिक वर्षलाई सरकारले ‘घुमफिर वर्ष’ घोषणा गरेको छ । यसै अवसरमा नौबिसे, खाल्टे, ज्याम्रुङ, नीलकण्ठलगायतका जिल्लाका होमस्टेलाई सुधार गरिएको छ । यी होमस्टेहरू पुन: सञ्चालन हुन थालेको छ ।